Naqshadeynta Tattoo 2021 - TattooIP.com
jirka oo dhan
jirka bini aadamka
Dusha sare ee cagaha
Lugaha quruxda badan
Garabka midabka leh
Qayb gaar ah
Meel gaar ah
Dameer qurux badan
Gabar gabar ah
Nin Gacmo Badan
Gabar dhalinyaro ah
kalluun dahab ah
Kalluun yaryar oo dahab ah
Shimbiraha iyo ubaxyada
Madaxa maroodiga ilmaha
Gooseedka duurjoogta ah
Balaasti buluug ah
Bisado yar oo madow
Midab jilicsan oo midab leh
Foornada afarta-geedka ah
ubaxa miro guduud
Bakhtiyaa buluug ah
Geedka canabka ah
Ubax yar yar oo ubax leh
Ubax ubaxa ah
Ubax qorrax leh
Casaan buu kacay
Si tartiib tartiib ah
Jirka ubaxa Ingiriisiga
Astaan aan dhamaad lahayn
Dabka aan la aqoon
La dagaallanka Buddha
Madow iyo caddaan la'aan
Malaa'ig lix gees ah
Malaa'ig ilaaliye ah
Madow iyo caddaan
Buluug casaan ah
Boqorka aan dhiman
Indhaha wax walbaba
Dibnaha casaanka ah
Kumanaan warqad warqad ah
Dunida biyaha hoostiisa ku jirta
Baalal buruq ah
Cidhiidhi dhinaca dambe
Qaansada iyo fallaarta
qorrax soo bax
rinjiyeynta muuqaalka dhirta
Maraakiibta burcad badeedda
Diyaarad warqad ah
Biyaha ayaa daadanaya
Ubax Fillaal yar
Dayaxa iyo qorraxdaba
Wax yar oo cusub
Yurub iyo Ameerika
aan guud ahayn
Kala xoqida khad
Qaabka reer galbeedka
Canab Yurub iyo Mareykan
Yeey cirro leh
Nin yar oo hurdi ah
Duck yar oo hurdi ah
U dir xiddig weyn
Gabar qurux badan
Ilmo la mid ah
Wejiga dhoola caddeynta
Hal abuur leh
Laba iyo toban xiddig
Qadka qabyada ah
Indhaha oo dhan
jilicsan oo qurux badan
gacan ka hadal
Khariiddada Joogtada ah
Miyey sharafdarro u noqon doontaa qof Mareykan ah inuu helo tattoo tane Hawaiian ah?
Ma ihi reer Hawaiian laakiin waxaan ku noolaa Hawai'i in ku filan oo aan uga jawaabo su'aashaada waxoogaa fahansan jawaabaha kale ee aan ka akhriyay dadka sida muuqata muuqata dadka deegaanka Hawai'i ma ahan..
Haa,Hawai'i waa gobol ku yaal Mareyka......
Farshaxanka tattoo, muxuu ahaa sheeko ka dambaysay tattoo oo kugu dhegeystay?
Hagaag,darn,tani waxay noqon doontaa jawaab nasiib xumo ah,maxaa yeelay waxaan rabaa inaan ilaaliyo asturnaanta ninkan sida ugu badan ee suuragalka ah - iyo sidoo kale sababtoo ah waxay ahayd dhowr sano,oo ma xasuusto dhammaan faahfaahinta si buuxda.......
Waxaad tiraahdaa qof dufan leh wuxuu ku dhacaa tattoo leh ereyo.
Waxay kuxirantahay inta culeysku yahay,intaad lumiso,sida dhakhsaha ah ee aad u lumiso,iyo halka ay ku taal tattoo.Haddii aad lumiso ~ 50 rodol ama ka yar,inta ay u badan tahay ma qallooci doonaan,laakiin hadaad luminayso ilaa 100 rodol,markaa waxaa ......
Dadka qaarkiis maysan tegi doonin dukaan maxaa yeelay waxaa ku yaallo qol tattoo ah oo isla isla Plaza ah (oo loo maleynayaa in dadka skatteetka ah ay ku dhegan yihiin dukaamada tattoo)?
Mararka qaar.Dadku markasta ma oga inay dhakhaatiirtu yihiin,qareenada,iwm.,waxay sidoo kale leeyihiin tattoos labiska shaashaddooda iyo gacmo dhaadheer.
Waxaan ka shaqeyn jiray sidii soo dhaweyn uhelaha istuudiyaha ballet-ka ee ku yaal meel ka ba......
Sideed u doorataa wax aad kuxarato oo aad haysatid fursad yar oo aad kaga qoomamayso tattooed?
Qof walba ma qoomameeyo tattoos-yada ay leeyihiin.Kama qoomameynayo wax kastoo aan leeyahay.Si kastaba ha noqotee waxaan qaatay waqti aan si taxaddar leh uga fiirsado qayb kasta waxaanan ku kalsoonahay farshaxanadeyda waxaanan door firfircoon ka qaat......
Yaanan u qaadan in dadka farshaxanka leh ay iskaga laalaadaan qolka nasashada.
Taasi waxaa laga yaabaa inay run ahayd 20u201330 sano ka hor.Laakiin hadda,tattoosku waxay noqdeen wax caadi ah.Wadaadada Tattoo waxay hadda ku soo baxayaan suuqyadaaga......
Miyaad aamminsan tahay wararka xanta ah ee sheegaya in Prince Charles uu leeyahay tattoo Jimmy Saville?
Hal mar,Amiir Charles iyo Jimmy Savile si dhaw ayey u wada shaqeeyeen.
Dhab ahaan,Charles wuxuu ku casuumay Jimmy Savile inuu noqdo qabanqaabiyaha xafladda boqornimada wuxuuna ka codsaday inuu ku casuumo martida Kensington Palace isaga oo matalaya......
Miyaad ku dhajin lahayd sawir sawir-gacmeed ama sawir?
Hubaal,maxaa loo waayey2026
Maxaa ka xanuun badan, tattoo ama duulinta?
Waxay kuxirantahay.Tattoo ayaa ka xanuun badan helitaanka garabka carrabka,waayo-aragnimadayda.Laakiin helitaanka ibta naasahayga dhaawacantay WAY ka badan tattoo! ,weligood way adag yihiin waxayna ku xoqdaan shaashadda xitaa isla markiiba ka dib mar......
Waa maxay sababta aanan u helin tattoo tattoo ah?
Waligeey ma dooneynin tattoo laakiin marwalba waxaan is iri \_"Waxaan qiyaasayaa hadii aan waligey mid helo inay ku dhici laheyd xabsi,maxaa yeelay meeshaas yaa dan ka leh?\_"
Qeybta waalan ayaa la i yiri waqti dheer kahor intaanan runtii xabsiga ku......
Ma khaladbaa in qof lala kala baxo maxaa yeelay waxay leeyihiin tattoo?
Sababta oo ah waxay leeyihiin tattoo?Malaha,laakiin leh godad.
Haddii tatucu yahay cunsuri,nacayb ama haddii kale weerar iyo / ama aan habooneyn,malaha maya,waxay kuxirantahay aragtidooda ku wajahan.Waxay sameeyeen qalad doqonnimo ah oo ay hadda a......
Waa kuwee weedha saxda ah “Aniga ayaa dhabarkaaga ku aragtay sawirka” mise “Waxaan dhabarkaaga ku arkay tattoo”?
\_"Dhabarkaaga dambe\_" waa sida qof qof ku ilaaliyaa sidaada oo kale ayaan dhabarkaaga u helay.
Haddii aad ka hadlaysid wax ku saabsan qoritaan ama sawirro la galiyay dhabarkaaga sida tattoo,
markaa dhab ahaan dhabarkaaga ayaa dhabarkaaga yaalla......
Shiine (La Fududeeyey)
Shiine (Dhaqan ahaan)